परीक्षा बिग्रको भन्दै १३ वर्षिय किशोरले गरे आत्महत्या, दोषी अभिभावक कि विद्यालय ? |
परीक्षा बिग्रको भन्दै १३ वर्षिय किशोरले गरे आत्महत्या, दोषी अभिभावक कि विद्यालय ?
प्रकाशित मिति :2018-03-20 11:19:37
काठमाडौं— झापाको दमकस्थित सूर्योदय स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत प्रोत्साहन थापाले जिल्लास्तरीय परीक्षा (डीएलई) मा कम नम्बर ल्याएका कारण आत्महत्या गरेका छन् ।
विद्यालयका शिक्षकहरुले कक्षा ८ को प्रि—बोर्ड परीक्षामा कम अंक ल्याएकाले कक्षा ९ मा भर्ना हुन नपाउने भनेपछि तनाबमा रहेका उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंक परिवारको छ ।
प्रोत्साहनका बाबु मेघराज थापा भन्छन्, “हाम्रो छोरा पढाइमा धेरै कमजोर थिएन । उसका शिक्षकहरुले यस्तो भनेको भन्ने सुनेको हो मैले तर पनि अझैसम्म के कारणले उसले यति ठूलो कदम उठायो भन्ने निधो भएको छैन ।”
प्रोत्साहनले चैत ९ गते आउँदै गरेको परीक्षामा राम्रो गर्छ भन्ने सोचेर पनि त्यस्तो भनेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
उनी कक्षा २ सम्म दार्जिलिङ पढेका थिए । पछि नेपाल सरकारले शिक्षकहरुले आफ्नो छोराछोरी सामूदायिक विद्यालयमा पढाउन पर्ने प्रावधान ल्याएपछि छोरालाई कक्षा ३ देखि सूर्योदय विदालयमा भर्ना गरेको उनका बाबुले बताए ।
उनका बाबु पहिला शिक्षक भएपनि हाल नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन् भने उनकी आमा शिक्षिका हुन् ।
थापा कक्षा ७ सम्म होस्टेल बस्दै आएका र यो वर्षदेखि मात्र घरमा बसेका थिए । बाबु मेघराज थापाका अनुसार प्रोत्साहन भलादमी स्वभावका थिए । छोराले दशैंभन्दा अगाडि घरमा आएर विद्यालयका एक शिक्षकबारे उजुरी गरेको थापाले जानकारी दिए । “छोराले दशैं अघि उसको एक शिक्षकले उसलाई कक्षा ८ को परीक्षामा कुनै हालतमा पनि पास हुन नदिने भनेर भनेका थिए रे ।” थापाले भने, “मैले यस विषयमा उक्त शिक्षकसँग कुरा गर्न विद्यालय पनि गएँ तर उनलाई भेटिन ।”
फेसबुकको कमेन्टहरुमा हेर्दा उनको प्राक्टिकल अंक ४२ लाई २४ बनाएको भन्ने कुराहरु पनि आएको थापाले बताए । “मैले छोरालाई यूट्यूबमा कसरी समयको व्यवस्थापन गर्ने, मालिक हुने कि नोकर हुने, कसरी ठूलो मान्छे बन्ने भन्ने जस्ता कुराहरु देखाइरहेको हुन्थें” उनले थपे ।
प्रोत्साहन विद्यालय जान नमान्ने, रिसाउने, विद्यालयबाट निराश भएर आउने जस्ता क्रियाकलापहरु देखाउदैनथे । केही स्रोतहरुबाट बच्चाले कम नम्बर ल्याएको र उनकी आमाले बाबा आएपछि उनलाई गााली गर्ने र अब उ माथिल्लो कक्षामा जान नपाउने जस्ता कुराले गााली गरेकाले थापाले आत्महत्या गरेको भन्ने पनि हल्ला थियो ।
थापाका बाबुले यो कुरामा आफ्नो कुरा राख्दै भने, “बरु छोराले नै आमासँग मलाई बाबाले कुट्नुहुन्छ अब रिसाउनुहुन्छ भनेको थियो रे ।”
शुक्रबार उसको नतिजा प्रकाशित भयो र शनिवार उसको ट्यूसनको बिदाको दिनपनि आमाले पढाउने सरलाई घर बोलाउनुभएछ । उसले सरसँग पनि आफ्नो परीक्षा बिग्रेको दुखेसो पोखेको सुनेको छु ।सरले उसलाई अझै १ हप्ता छ म तिमिलाई दोब्बर पढाउँछु भनेर पढ्ने समय पनि दिनमा दुई चोटि बनाएका थिए ।”
आफूले बच्चालाई पढाइ महत्वपूर्ण र अग्र स्थानमा राख्नुपर्छ भनेतापनि पढ्नैपर्छ भनेर दबाव नदिएको बाबु मेघराज थापाको दाबी छ । थापा कराँते पनि खेल्थे । शिक्षकले ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म पढाएर होमवर्क दिई ११ बजे आउँछु भनेर गएका थिए । तर त्यसपछि थापाले कराँते खेल्ने बेल्ट प्रयोग गरेर आत्महत्या गरे ।